Fishery export to China needs COVID-19 clearance certificate | Myanmar Business Today
Home Business Fishery export to China needs COVID-19 clearance certificate
Fishery products will requireaCOVID-19 clearance certificate when exporting to China as Chinese authorities demand it, according to the Myanmar Fishery Federation.
Dr. Aung Thu, Union Minister of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, has also pledge departmental collaboration to issueaCOVID-19 clearance certificate.
Meanwhile, there are also requirements such as adopting standards, improving the technical skills of the government staff, and conducting awareness-raising campaigns for cold storage so that COVID-19 clearance certificate.
Myanmar earned $732.156 million from exporting fishery export in the 2018-2019 fiscal year and saw an increase in the 2019-2020 fiscal year as it earned $858.869 million.
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရာတွင် ကိုဗစ်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်လိုအပ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန် နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီမှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်း များ တင်ပို့ရာတွင်COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်လိုအပ်မည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ငါးများ ကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးမွှား ကင်းစင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူက ပြောကြားထားသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင်ဆောင်ရွက်မည့် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုက်နာရမည့် စံများ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် နည်းပညာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အအေးခန်းစက်ရုံများကို အသိပညာပေးခြင်း တို့ကို တစ်ပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့နိုင်မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃၂ ဒသမ ၁၅၆ သန်း ရှိပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅၈ ဒသမ ၈၆၉ သန်းထိ တိုးတက်လာကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။
La définition la plus simple est l’incapacité à atteindre une érection niveau qui permettrait d’avoir un rapport sexuel satisfaisant pour les deux partenaires. Le titre vous voir publié sur la pilule est l’ingrédient actif utilisé. Le contenu de générique comprimés sont complètement la même que pour les modèles de la marque. best online casino Les fabricants de médicaments génériques ne pouvez pas utiliser des noms de marque de leurs produits pharmaceutiques qui pourrait être la violation du droit d’auteur lors de l’utilisation des ingrédients bien connus est tout à fait légal.
Previous articleMyanmar Embassy in Malaysia to temporarily close due to lockdown
Next articleMIC approves 14 new investments